Ndị ọkachamara na Semalt akọwalarị ọdịiche dị na Desktọpụ SEO na Mobile SEO
N'ahịa ahịa dijitalụ, ọtụtụ atụmatụ SEO anaghị atụle ngwaọrụ ndị ọbịajiri aka weebụ. Ulo oru kachasi ngwa ngwa chefuo iji bulie ebe ha na ebe nrụọrụ weebụ maka mmeghariputa igwefoto mgbe ha na eme hammepe weebụ. Nnyocha e mere na nso nso a egosipụtala na ekwe ntị na-eji dochie kọmpụta na ịfụgharị ịntanetị na ọnụego 4%. Ọzọkwa,ọtụtụ n'ime okporo ụzọ search engine na-abịa site na ekwentị mkpanaaka, ọ bụghị desktọọpụ PC dị ka ọ dị tupu.
Ulo oru ụfọdụ na - ewere ohere a iji mejue onodu ahia - the best tank e cig. Dị ka ọmụmaatụ,ọtụtụ ndị na-eji ekwe ntị eme ihe n'ịntanetị. Na Jenụwarị afọ a, Google mere ka o doo anya na otu n'ime ụzọ ha algọridimọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ bụ ụzọ otu ebe nrụọrụ weebụ na-esi azaghachi.
Nchọpụta Ngini Nchọpụta gụnyere ịbawanye visibilite nke ebe nrụọrụ weebụ n'Ịntanet.Nchọgharị ọchụchọ na-ekere òkè n'usoro a. Ihe ka ọtụtụ n'ime ha na-agụnye ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ enyi na enyi. Site na onye mmepụta weebụechiche, ọtụtụ SEO ụzọ maka mobile enyi na enyi na ebe nrụọrụ weebụ na-arụ ọrụ kpamkpam dị iche site na otú desktọọpụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ.
Mobile SEO dị iche na desktọọpụ desktọọpụ SEO. Onye ọkachamara Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, Ross Barber na-akọwa akụkụ nke ọdịiche a.
Nchọta nke nsonaazụ..Google na-etinye aka na-ebute ebe dị elu maka mobilengwaọrụ. Mmezi a na-eme ka SEO obodo dị mma maka ebe nrụọrụ weebụ mkpanaaka. Geo-gbanwetụrụ ọchụchọ nwere ike iru mobile ngwaọrụ ngwa ngwa karịaha na-aga na kọmpụta. N'otu oge ahụ, ụzọ yiri nke a na desktọọpụ nwere ike ime ka ịmepụta ọdịnaya na ọtụtụ ngalaba. N'ihi ya, ọtụtụụlọ ọrụ na-eleghara ọdịiche a anya. Otú ọ dị, ị nwere ike irite uru na nke a site na iji mpaghara ndị nwere ike maka ebe nrụọrụ weebụ gị. N'otu oge ahụ,ichota ọdịnaya na ebe mkpanaka gi ga-eme ka njikọ gi na ikike nke akwukwo site na redirects 301
Mbido bọtịnụ oku na-eme. Ọtụtụ ndị ọrụ weebụ na-aga na ebe nrụọrụ weebụ maka ozi ma ọ bụzụta. Ekwentị mkpanaka chọrọ nnukwu bọtịnụ spaced. Njirimara a na-enye ndị ọrụ smartphone aka inwe nsogbu na ihuenyo mmetụ hantinye. Otú ọ dị, onye na-edegharị ọnụ òké nwere ike ịdị icheiche njikọ njikọta-njikọta ma pịa nke ọ bụla n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Ọdịnaya. N'ihe oru ahia di iche iche di iche iche, isiokwu na ọdịnaya bu isi ihe.Nchọpụta Nchọpụta Nyocha na-agbaso gburugburu okwu na ọdịnaya. Otú ọ dị, ụzọ onye na-etinye mkpụrụ okwu na ebe nrụọrụ weebụ na-agagharị abụghị ụzọọ na-aga na saịtị ntanetị. Dịka ọmụmaatụ, kọmpụta chọrọ njirimara mkpa na mkpuchi ozi. Maka nke a, ọdịnaya desktọọpụ nwere ikeruo ruo 1000 okwu ma dịrị na obere font iji jikọta ọdịnaya mara mma. Otú ọ dị, nke a abụghị ikpe maka enyi enyiweebụsaịtị. Ihe nchọgharị weebụ na-arụ ọrụ kachasị mma site na nnukwu fon na ọdịnaya dị site na 300 okwu ruo 700 okwu.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị etinye aka n'ememme enyi na enyi mgbe ha na-emepụta haweebụsaịtị. E nwere ọtụtụ ụzọ nke mobile SEO si dị iche na desktọọpụ SEO. Dị ka ọmụmaatụ, usoro SEO mobile na-eji obere iheọdịnaya na nnukwu mkpụrụ akwụkwọ nke na-emegide ihe Google chọrọ site na ntinye ederede na desktọọpụ PC. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emeebe obibi ha na-enwe mkparịta ụka enyi na-amịpụta uru site na atụmatụ a. Ya mere, ọdịiche ndị a nwere ike inyere gị aka mkpọsa SEOiji mụbaa ma nwetakwuo ndị ọbịa site na ngwaọrụ mkpanaka.